3 Na 1 Integrated ịghasa Air Compressor kọmpat Unit na ịghasa Air Compressor, Air draya na Air tank
Site na ijikọ ihe nkedo ikuku ikuku, ihe nhicha ikuku, nzacha nkenke, ụlọ na tank, ngwakọta ikuku ikuku jikọtara ọnụ na -adị mma, mara mma na omume. Site na ịrụ ọrụ n'ime ihe nhicha ikuku na ihe nzacha ikuku, ikuku na -emepụta ihe kpọrọ nkụ ma dị ọcha nke nwere ike inyere ngwaọrụ ikuku/ahịrị mmepụta aka ịrụ ọrụ nke ọma na enweghị nsogbu. Ihe nlereanya a nwere ike ịnye arụmọrụ dị elu, obere oghere nrụpụta yana mmalite ọrụ ngwa ngwa.
Rotary Screw Air Compressor nke mmanụ mmanụ mmanụ na IP54 Motor German Air End
Igwe nrụpụta ikuku rotary na -ewu ewu na ụlọ nrụpụta, osisi, ma ọ bụ ebe nrụpụta ọ bụla n'ihi okirikiri ọ na -agba. Ebe ụdị ikuku compressors ndị ọzọ nwere ike na-arụ ọrụ naanị maka ịgbanye/gbanyụọ okirikiri, ihe nkedo rotary na-akwụsị na-akwụsịghị elekere. Site na usoro okirikiri ọrụ dị 100%, ekwesighi imechi igwe nrụgharị ikuku rotary ma maliteghachi na ya ugboro ugboro. Ọ bụrụhaala na igwe mpịakọta rotary na -agbada n'ụzọ ziri ezi, arụmọrụ ya dị elu karịa ọtụtụ ihe nrụpụta ikuku ndị ọzọ. Modelsdị kacha mma nke rotary screw compressor na -enyere ụlọ nrụpụta aka ịbawanye arụmọrụ n'ofe usoro mmepụta.
2inch ruo 8inch Submersible Water Pump for Deep Deep
Mgbapụta olulu miri emi bụ nke igwe na mgbapụta jikọtara. Ọ bụ ụdị mgbapụta mmiri a na -emikpu n'ime olulu mmiri dị n'ime ala maka ịpịpụta na ibupu mmiri. A na -ejikarị ya eme ihe n'ubi mmiri na igba mmiri, ụlọ ọrụ mmepụta ihe na ebe a na -egwupụta akụ, mmiri mmiri na mgbapụta mmiri, yana ọgwụgwọ nsị.
Akwa arụmọrụ na -adịgide adịgide Igwe Ọdụdọ na -agbanwe agbanwe Frequency Screw Air Compressor na Low Noise
A na-amata ihe ndọta ikuku na-adịgide adịgide agbanwe agbanwe ikuku compressor dị ka ihe nrụpụta ikuku kacha arụ ọrụ nke ọma n'ụwa. A na-etinye moto magnet na-adịgide adịgide ma na-eme ka compressor chekwaa ike karịa 5% -12% karịa moto asynchronous atọ nke nkịtị. Mkpụrụ moto nwere ike ijigide arụmọrụ dị elu ọbụlagodi n'okpuru obere ọsọ, ka ndị nrụpụta wee nwee ike chekwaa 32.7% nke ike na nkezi.
Ịchekwa ume na-echekwa mkpakọ nke abụọ na-emegharị ikuku compressors nwere obere ọsọ
Na-etinye egwuregwu zuru oke nke moto ndọta na-adịgide adịgide, inverter na nnyefe njikọta, enwere ike iji ngwụcha ọkwa nke okpukpu abụọ chụpụ ya. Ndụ ọrụ nke okpukpu abụọ dị ogologo karịa ihe atụ oge niile n'ihi RPM dị ala, ewezuga ike ịchekwa ihe doro anya karịa 20%. Site na rotors abụọ nke nha dị iche iche, enwere ike nweta nkesa nrụgide ezi uche iji belata oke mkpakọ nke mkpakọ ọ bụla. Ngwunye mkpakọ dị ala na -ebelata mgbapụta dị n'ime, na -abawanye arụmọrụ volumetric, ma na -ebelata ibu ibu, na -agbatị ndụ ọrụ nke igwe isi.